Kulan lagu soo dhaweynayay Maareeyaa cusub ee Hay’adda Duulista Rayidka oo Muqdisho lagu qabtay+Sawirro | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Kulan lagu soo dhaweynayay Maareeyaa cusub ee Hay’adda Duulista Rayidka oo Muqdisho...
Ururka midowga Duulimaadyada dalka ayaa soo qaban qaabiyay munaasabadaan lagu soo dhaweynayay Maareeyaha cusub ee hay’adda duulista rayidka Axmed Macalin Xasan ee uu dhawaan Madaxweyneha dalka u magacaabay iyo sharciga duulista rayidka Soomaaliyeed iyadoo ay ka soo qeyb galeen wasiiiro iyo xildhibaanno ka tirsan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada.
Axmed Macalin Maareeyaha hay’adda Duulista Rayidka Soomaaliyeed ayaa ka hadlay heerarka uu soo maray maamulka Hawada dalka.
“Dadaal badan ayaan soo galinay sidii aan dib usoo celin laheyn maamulka hawada ugu dambeyne waxaan ku guuleysanayay inaan ka miro dhallino ayuu yiri Maareeye Axmed Macalin.
Xildhibaan Farxiyo Muumin Cali iyo Seneter nacimo Ibraahim yuusuf oo labaduba ka tirsan guddiga gadiidka ee labada aqalee barlamaanka ayaa bogaadiyay juhdiga lasoo geliyay dhameytirka sharcigaan muhiimka u ah dalka.
“Hadii aan nahay guddiga gadiidka ee labada aqal waxaan si xooggan uga soo shaqeynayay inaan meel marino dhalino innagoo fiirineyno muhiimada sharcigaan uu u leeyahay dalka waana ansixinay isagaa si wadajir ah looga soo shaqeeyay.
Wasiirada gadiika iyo duulista hawada dowlada gobaledyada Hirshabeelle,Galmudug iyo Koofur galbeed ayaa sheegay in ay aad ugu faraxsanyihiin in sharcigaan la ansixiyo.
“Waxaan uga mahadcelineynaa madaxda Qaranka iyo wasaaradda gadiidka iyo duulista hawada dowladda Soomaaliya inay heerkaan soo gaarsiyaan isla markaana ay dhameystiraan sharciga, waana kula shaqeyneynaa. Ayay ku dareen hadalkooda.
Wasiirka Gadiidka iyo Duulista Hawada ee xukumadda fedeeraalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad (Oomaar) ayaa in maamul goboleedyada ay kala shaqeynayaan hormarinta garoomada dalka.
“Diyaar Ayaan unahay inaan kala shaqeyno dowlad goboleedyada horu-marinta garoomada dalka si aan kor ugu qaado nidaamka caalamiga ee garoomada dunida iyo inaan ka shaqeyno horu-marinta kaabayaasha .Wasiir Oomaar.
Gaba-gabadii ayaa lagu soo bandhigay ardayda ugu horeysay ee baratay cilmiga maamulka hawada ee uu soo saaray machadka Duulista Hawada Ratidka ee dalka kuwaasi oo gaabta lagu siiyay shahaado Sharaf.
Maqaal horeDowladda oo War kasoo saartay howlgal ka dhacay Jubbada Hoose
Maqaal XigaMaamulka Jubbaland oo soo dhaweeyay dib-ufurista duullimaadyada caalamiga ah.